Iska ilaali tayada munaaraadka ciyaarta iyo kor u kaca
Tuwarrada iyo kor u qaadista munaaradaha si ay u ciyaaraan
Qalabka alwaaxda oo dhan marwalba
Carruurtu way yar yihiin sahamiyeyaal iyo baadi-goobayaal, kuwaas oo aan si buuxda uga warqabin xiisahooda iyo dareenka cayaarta. Sababtan awgeed, alaabta carruurtu ku ciyaarto waa inay noqdaan mid adag oo joogto ah.
Carruurta firfircoon waxay ubaahan yihiin qalabka ciyaaraha adag
Gaar ahaan xilliga kuleylka, oo kugu martiqaadaya inaad waqti wakhti ku qaadato, waa wax aad u wanaagsan, fikradaha loogu talagalay qalabka ciyaaraha cusubi waxay noqon kartaa mid waxtar leh. Carruurtu waxay jecelyihiin inay ka baxaan banaanka beerta ama goobta ciyaarta da 'kasta.
Badbaadada inta aad ciyaareyso
Ciyaaraha jidadka waxaa laga yaabaa inay ku fiican yihiin safar gawaarida gawaarida iyo jeesjeeska, laakiin beertaada ayaa weli ah goobta ciyaarta ugu fiican.
Halkan waxaad noqon kartaa gawaarida, boodada iyo sanduuqa. Haddii Aabaha u gaar ah si fiican u maleeyo, an munaaraddii play xiiso leh, halkaas oo Knights yar iyo Navigator weyn naftaada quusin karo in ay dunida uu ku dhisan.
Xayawaannada qoryaha ayaa weli ah kuwa ugu caansan
Si aad ula socoto munaaradaha ciyaarta muddo dheer, ma aha oo kaliya laga heli karaa noocyada dhismaha kala duwan, laakiin sidoo kale in qalab kala duwan. Laakiin alwaaxda alaabtu si cad ayaa looga adkaaday halkan waxayna caan ku tahay maaha oo kaliya sababtoo ah dusha sare, laakiin sidoo kale nolosheeda dheer.
Tani waa dabcan waa lagama maarmaan in munaarad fuulaysa ay ka kooban tahay alwaax tayo sare leh iyo shaqo fiican. Aabaha Farshaxanka ah ayaa sidoo kale ka dhigi kara mid ka mid ah jibbaarada iyo walxaha dusha sare leh. Dabcan, qoryaha waa in lagu jajabiyaa si habboon iyo cadaadiska-la marsiiyo si aan loo dhigin midabyo iyo xalal waxyeello leh.
Qalabka ganacsi ahaan loo heli karo ayaa si habboon loo hormariyaa waxaana loo baahan yahay oo keliya in lagu dhejiyo xirfad iyo qalab sax ah. Haddii aan la samayn karin keligiis, waalidku waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan haddii bixiyaha uu bixinayo adeegga jirka jirka.
Ka dib markii xilliga bannaanka ee beerta, farcanka mar kale marar badan iyo in ka badan ciyaarta ciyaarta ee. Halkan, sidoo kale, alaabada lagu ciyaaro ee qoryaha ayaa kaalin muhiim ah ka ciyaara. Waxaa laga yaabaa in ay tahay sababta oo ah arrinta ku saabsan jiritaanka sii muhiim ah in mabda, laakiin sidoo kale u dhow in ay dabeecadda iyo cimri dherer sare door weyn ka alwaaxda wax.
Bacaha waa nasiib daro marwalba ka weyn sababtoo ah bacaha waxyeellada leh ama midabyo suaalo ah oo suurtagal ah ayaa ku jira cinwaanada, gaar ahaan alaabta carruurtu ku ciyaarto. Si kastaba ha ahaatee, alaabada lagu ciyaaro alwaaxda waa in aan la iibsanin iyada oo aan lagu qanacsanayn, sababtoo ah xitaa qalabkan waxaa ku jiri kara midabyo iyo rinjiyooyin waxyeelo leh. Tayada tayada waxaa lagu arki karaa dukaamada tafaariiqda takhasuska ah ee noocyada la yaqaan sanado badan.
Ku duub qalabka xashiishka
Carruurta da 'kasta leh waxay jecel yihiin alaabta lagu ciyaaro qoryaha, xiitaa haddii aysan afuufin oo dhawaaqin. dukaanka la dhalooyin midhaha, ukunta, jalaatada iyo cabitaanada fudud oo qoryo laga sameeyeyba, tareenada ka, ciyaaraha loox, xujooyinka iyo ciyaaraha waxbarashada ayaa la bixiyey oo loogu talagalay tayada koorsada iyo xeelad maanta in ay tahay farxad u ah carruurta oo da 'walba si ay ula ciyaaraan.
Iyada oo ciyaarahaas lagu ciyaaro, raaxada alaabta waxay sii socon kartaa xitaa ka badan jiil.
Maxay cayaartu muhiim u tahay? Wakhti xor ah oo caruur leh
Carruurtu waa inay bartaan inay ciyaaraan oo ay waayaan
Jardiinooyinka Duulaya | Waqti iyo ciyaaro lacag la'aan ah
Maxay cayaartu muhiim ugu tahay caruurta?
Midabaynta bogga wiilka & gabadha cayaarta
Midabaynta Golf Golf
Waa maxay sababta ay carruurtu u ciyaari karaan wax badan?
Jacaylka saaxiibka ugu fiican
Fikrad ku saabsan "Dhamaadka Musqulaha iyo Tikidhada Kuleejka ah ee Ciyaarta"
oli wuxuu leeyahay,
26. Janaayo 2016 ee 23: saacadda 45
taasi waa runtii aad uwanaagsan tahay in la koro. Sidoo kale, waxaan u maleynayaa in munaaradaha iyo muraayadaha alwaaxda la mid ah ay yihiin hantida carruurta iyo beerta. Inta badan, sababtoo ah caruurta ayaa hadda noqday badan, kexeeyey oo qalabka ka mid ah warshadaha madadaalada ee nooca yah, cawaaqib oo dhan.
Haddii aad rabto inaad wax wanaagsan sameyso carruurta leh munaar ciyaareed ciyaar, markaas tayada ayaa ah mudnaanta koowaad. Tani waxay saamayn ku ma aha oo kaliya xasiloonida ee qalabka, laakiin sidoo kale qaab hufan oo si fiican loo qorsheeyay oo Gefahrequellen reebay oo si yaraynaysaa halista dhaawacyada. Moolasha la dhiso oo la dhisay iyadoo loo eegayo DIN EN 71-8 ayaa dhab ahaantii tixgelisay.
Qaab kale oo muhiim u ah tayada aniga, si kastaba ha ahaatee, waa in aan loo isticmaalin alwaax cadaadis ah. Iyada oo alwaax caadi ah (tusaale ahaan Nordic gran) iyo Dünschichtlasur deegaanka la aqbali karo biyo ku salaysan ku dhowaad gaari karaan natiijo isku mid ah in cimri dherer ah. Tani waxay ka ilaalisaa degaanka oo keliya, laakiin sidoo kale carruurtiisa ka soo jeeda maaddooyinka sunta ah ee cadaadiska boorsada.
Shirkadaha intooda badani waxay ku andacoodaan in aan la dhaqi doonin, laakiin nasiib darro xaqiiqda ayaa caddaynaysa haddii kale. Sidaa darteed, aniga oo kaliya, minaarad-kiimiko oo kaliya ayaa soo socota.